merger(merger) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । मिर्मिरे लघुवित्तले बुद्धज्योति लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्ने प्रक्रियालाई टुंगो लगाउन दुवै लघुवित्तले एकैदिन विशेष साधारणसभा डाकेका छन्। दुवै लघुवित्तको हिजो असार १५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यही असार ३१ गते विशेष साधारणसभा डाकेका हुन्। मिर्मिरे लघुवित्तको विशेष साधारणसभा काभ्रेको धुलिखेलस्थित होटेल सारथी र...
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकबीचको मर्जरलाई अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको छ। आज बिहान राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले नबिल र एनबी बैंकलाई मर्जरको अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको हो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्विटजरल्यान्डको कार्यक्रम सकेर मंगलबार फर्किएपछि बुधबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको...
नवील बैंकमा कर्मचारीको आन्दोलन, मिलिसकेको कुरा कहाँ बिग्रियो ?
काठमाण्डौ । नेपाल बंगलादेश(एनबी) बैंकलाई मर्ज गर्ने क्रममा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुलाई साबिककै लेभलमा लगिने सहमति बनेपछि त्यसको विरोधमा नवील बैंकका कर्मचारीहरुले आन्दोलन थालेका छन्। नवील बैंकका कर्मचारीहरुले वर्षौदेखि आफूहरुको बढुवा लगायतका विषय थाँतीमा रहेका भन्दै ती विषयलाई समेत टुंग्याएर मात्र अगाडि बढ्न र आफूहरु तल पर्ने...
नवील–एनबी मर्जरको कालोबादल फाट्यो, १० दिनअघिकै सहमति कार्यान्वयन हुने
काठमाण्डौ । नवील–एनबी बैंकको टुंगिन लागेको मर्जर प्रक्रियामा आएको खटपटलाई शीघ्र प्रयासबाट दुवै बैंकका उच्च अधिकारीहरुले समयमै व्यवस्थापन गरेका छन् । एनबी बैंकका कर्मचारीलाई मर्जरपछि बन्ने बैंकमा जाँदा घटुवा गरी लैजाने पुरानो सहमतिलाई राष्ट्रबैंकले अस्वीकार गरी नयाँ सहमति कायम गराएपछि त्यो कार्यान्वयन हुन नदिन चलखेल भएको थियो...
काठमाण्डौ । हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकसँग पहिला ‘सर्टकर्ट डिडिए’ गरेर मात्र मर्जरका लागि सम्झौता गर्ने भएको छ । हिमालयन बैंकका एक सञ्चालककाअनुसार क्रसहोल्डिङ भएका कारण समेत सिभिल बैंकसँग मर्जर छलफल चलिरहेको उल्लेख गर्दै पहिला ‘सर्टकर्ट डिडिए’ गरी मोटामोटी स्वाप रेसियो लगायतका विषय हेर्ने, अनि मात्र मर्जरको सम्झौता हुनेछ...
नवील–एनबी मर्जर भाँडिने सम्भावना, कर्मचारी नै एकअर्काविरुद्धमा
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकको अन्तिम स्वीकृतिको प्रतिक्षामा रहेकै बेला कर्मचारी समायोजनमा अन्याय परेको विषय चर्किएपछि अन्तिम अवस्थामा नवील–एनबी बैंक मर्जर भाँडिने सम्भावना बढेको छ । नवील बैंक र एनबी बैंकबीच मर्जरका क्रममा मर्जरपछि एनबी बैंकका कर्मचारीहरुको २ तहसम्म घटुवा गर्ने गरी भएको सहमतिमा नेपाल राष्ट्रबैंकले आपत्ति...
नवील–एनबी बैंक मर्जरलाई अर्को सातासम्म फाइनल अप्रूभल
काठमाण्डौ । नवील बैंक र नेपाल बंगलादेश(एनबी) बैंकबीचको मर्जरलाई नेपाल राष्ट्रबैंकले सम्भवतः अर्को सातासम्म स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ । राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टका अनुसार दुई बैंकको मर्जरलाई अन्तिम स्वीकृति दिनका लागि सो सम्बन्धी प्रस्ताव एकदुई दिनमै सञ्चालक समितिमा लगिने जानकारी दिए । केन्द्रीय बैंकस्थित एक...
ग्लोबल आइएमई र बीओके बराबरी स्वापमा मर्जरमा जाने सम्झौता, देशकै ठूलो बैंक बन्ने
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडबीच एकआपसमा गाभ्न गाभिनको लागि बिहीबार प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । समझदारीपत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकको तर्फबाट बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल तथा बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडका तर्फबाट बैंकका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्...
इन्भेस्टमेन्ट–मेगा बैंकबीच मर्जर सम्झौता हुँदै, अनुमोदनका लागि बोर्ड बैठक जारी
काठमाण्डौ । पूर्वसहमतिमा कुनै अवरोध आएन भने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीच आज मर्जर सम्झौता हुँदैछ। आज अपराह्न कुनै समयमा दुई बैंक सञ्चालक, सेयरधनी र उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरुको मात्र सहभागितामा मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता (एमओयू) हुने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका एक सञ्चालक बताए। मर्जरको एमओयू हस्ताक्षर गर्नुअघि...
इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंकबीच मर्जरका लागि छलफल सुरु, अर्को सातासम्म निर्णय हुने
काठमाण्डौ । विगत दुई दिनदेखि मेगा बैंकको सेयरमा लगानीकर्ता झुम्मिएका छन् । यो दुई दिनको अवधिमा मेगा बैंकको सेयरमूल्य पनि बढेको छ । बुधबार दोश्रो बजारमा प्रतिकित्ता २२५ रुपैयाँ रहेको मेगा बैंकको सेयरमूल्य बिहीबार एकैपटक बढेर २४७ रुपैयाँको उचाईमा पुग्यो । शुक्रबार पनि केही बढेर प्रतिकित्ता २५० रुपैयाँ पुगेको छ । निरन्तर घट्दो...
तीन जीवन बीमा कम्पनीबीच मर्जर सम्झौता, चुक्तापुँजीको हिसाबले दोस्रो ठूलो कम्पनी बन्ने
काठमाण्डौ । तीन जीवन बीमा कम्पनी आपसमा गाभिने भएका छन्। युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स आपसमा गाभिने भएका हुन्। मर्जर प्रयोजनका यी तीन कम्पनीबीच आज प्रारम्भिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सहमतिपत्रमा तीनै कम्पनीका अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्। बीमा समितिले हाल २ अर्ब रुपैयाँ...
एभरेष्ट इन्स्योरेन्स र हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार रोक्का
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले एभरेष्ट इन्स्योरेन्स र हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयर कारोबार रोक्का गरेको छ। नेप्सेले मर्जर प्रयोजनका लागि यी दुवै कम्पनीको सेयर राख्ने निर्णय गरेको हो। यी दुवै कम्पनीबीच हिजो वैशाख २२ गते मर्जरमा जाने सम्झौता भएको थियो। नेप्से वैशाख २३ गतेदेखि लागू हुने गरी यी दुवै...